Perth Saint 💙 - alingtt - Wattpad
Perth Saint 💙
Perth~နူးညံ့​သောအချစ်​က​နေ အမုန်းအဖြစ်​​ပြောင်းလဲသွားသူနဲ့ Saint~အချစ်​စစ်​ကိုရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိသွားသူသူတို့နှစ်​ဦးကကံကြာမ္မာရဲ့လှည့်​ကွက်​ထဲဘယ်​လို​ရှောင်​​ပြေးနိုင်​မာလဲ
𝚆𝚒𝚜𝚑 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚢𝚜𝚝𝚎𝚖
213K 34.3K 123
Uni စိတျသဘောကောငျးတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျဟာ ဖူးစာရေးနတျမငျးနဲ့ စာခြုပျခြုပျမိပွီး ဘဝမြားစှာမှာဝငျစားရငျး ဖူးစာကွိုးနီတှကေို ပွနျတညျ့ပေးရတဲ့အခါ.... Zawgyi စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ဖူးစာရေးနတ်မင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်မိပြီး ဘဝများစွာမှာဝင်စားရင်း ဖူးစာကြိုးနီတွေကို ပြန်တည့်ပေးရတဲ့အခါ....
🖤Accident Love to Forever Love( P & P Love)❤
3.9K 329 19
Perthနဲ့Saintတို့ကို သတိရ၍ရေးထားခွငျးဖွဈသညျ။ကလေး၂ယောကျကို အတူတှဲ၍ပွနျမွငျခငျြသော စိတျကူးမြားဖွငျ့ရညျရှယျထားသညျ။
11K 931 18
🖤 ဘယျလို ကတြျော လကျထပျရမယျ ဟုတျလား mae "ဟုတျတယျ မငျးညီအ့လူဆီမှာ အကွှေးတှေ ယူထားတယျ မငျးသူ့သားကိုလကျထပျမှ ဖဈမယျ Maeကိုကူညီပါနျော သား Perth" ############################# " သားကလိမ်မာပွီးသားပါ သားရဲ့ အဖှားဂုဏျကိုပွနျဆယျဖို့အတှကျ သား သူ့ကိုလကျထပျရမယျနျော" ❤ အဖှားအတှကျလား ဟုတျကဲ့ပါ Paw ကတြျော လကျထပျပါ့မယျ 🖤My Husband❤ ...
98.3K 7.7K 38
နာမညျလေးက ရိုးရှငျးပွီး သိမျမှတေ့ယျ မဟုတျလား? ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ အတ်တတှေ မာနတှနေဲ့ နညျးနညျးကွမျးတမျးတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူကွောငျ့............ နာမည်လေးက ရိုးရှင်းပြီး သိမ်မွေ့တယ် မဟုတ်လား? ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အတ္တတွေ မာနတွေနဲ့ နည်းနည်းကြမ်းတမ်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြောင့်............
Teacher Crush (Completed)
53.7K 3.9K 17
95.7K 10.9K 50
Let it Fill with Our Love (Completed)
157K 7.1K 46
They accidentally meet, then fall in love to each other. They accidentally teacher and student, but fall in love to each other. They accidentally roomates, but love blooming between them. Just my AU about Aepete, TinCan, and KlaNo couple from LBC. I didn't own the character. everything is belong to khun Mame. Credit...
226 16 8
57.8K 3.6K 48
ပထမဆုံးရေးတဲ့fic မို့လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ
271 26 5
My Amazing Horny Husband (Myanmar trans)
60K 3.4K 41
If you're under 18, don't read it.🔞🔞 I warned you I don't own this whole story.I just translate it.The owner of this story is @U_R_Girl Thanks to Author for this amazing story. ဒီ Fiction တွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် မူရင်းစာရေးသူနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါသည်နော် အမှောင်လောကသားတွေအတွက်တော့ Fiction ကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ ❤️
You're Mine 🖤❤️ (U+Z)
8.4K 606 14
"Perth Tanapon"(Uni) ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးဝငျကုမ်ပဏီရဲ့CEO တဈဦးဖွဈပွီး အလုပျကိုသာဦးစားပေး၍အခဈြရေးကိုဘေးခြိတျထားတတျပွီးဒေါသအလှနျကွီးတတျသူ "Saint Suppapong" ငယျငယျထဲကမိဘမဲ့ဂဟောတှငျကွီးပွငျးခဲ့သူ မှေးစားမိဘမြားရဲ့သဲသဲတုနျအောငျအခဈြခံရပွီး အမှေ‌တှေကွောငျ့ saintမှေးစားအဖအေကိုဖွဈသူရဲ့လိုကျသတျခွိမျးခွောကျခွငျးကိုခံနရေသူ .... ...
Be in love❤️🖤
83.9K 5.5K 78
Pinson ?? Sonpin?? ..you can feel both! Nge & his naughty boy...
Satisfaction 🔥🔥(Complete )
40.9K 2.4K 30
Warning Fic🚨🚨🚨 Don't read from who sensitive Zone❌❌❌❌❌❌❌❌❌ ဘယ်လောက်ထိပဲဂုဏ်ရည်တွေပြည့်ဝနေပါစေ အရာရာတိုင်းဟာ တန်ဖိုးမတူရင်တောင် တန်ဖိုးရှိကြစမြဲပါ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာ မင်းမပါဘူး Saint Suppapong Udokaewkanjana မျိုးရိုးတစ်ခုလုံးကိုငါမုန်းတယ်😏 Unicode Warning Fic Don't read from who sensitive Zone ဘယျလေ...
🖤You & Me❤️ (Hiatus)
10.9K 974 10